परदेशी ! परदेशी !!
लेखक : रमेशमोहन अधिकारी
जयपुरमा २०६३ असार सत्र गते राति ११ बजे रेल चढेका हामी अठार गते बिहान ७ बजे दिल्ली आइपुग्यौँ । आबुतिर जाने बेलामा हामीले दिल्ली घुम्ने ताल मिलाउन सकेका थिएनौँ । त्यतिखेर प्लेटफारमको पाँच घन्टाको समय व्यर्थै गएको थियो । अहिले पनि समय मिलाउन नसक्ता हाम्रो ठुलो गल्ती हुन्थ्यो । एउटा राम्रो अवसर हामीले गुमाउनु पर्थ्यो । दिल्ली पुगेपछि साधारण ढङ्गले नित्यक्रिया गरेर निस्किहाल्ने रेलमै सल्लाह भए तापनि ओर्लेपछि भने यसोउसो गर्दागर्दै एघार बजिहाल्यो । अब हामीसँग चार घण्टाजति मात्र समय बाँकी रह्यो डुल्न । यहाँ डुल्न हामीले महिन्द्रा गाडी भेट्यौँ ।
साथीहरू विभिन्न रुचिका थिए । दिल्लीका प्रत्येक अवलोकनीय स्थलहरू हेरौँ भन्थे कोही, होइन गाडीबाटै दिल्ली सरर हेरौँ भन्थे कोही, बढीभन्दा बढी ठाउँ हेरौँ भन्थे कोही । 'बढ्ता जोगी मठ उजाडे' भनेझैँ थरीथरीका रुचि र चाहना अनि त्यसै किसिमको आदेशले ड्राइभरसमेत हैरान भयो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि केही महत्त्वपूर्ण र प्रसिद्ध स्थलहरू हेर्न भ्यायौँ ।
सर्वप्रथम हामी गान्धीसमाधि पुग्यौँ । गान्धी परिवारकाहरूलाई समाधिस्थ गर्ने गरिएको ठाउँ रहेछ यो । गान्धीसमाधि एउटा सुन्दर र विशाल पार्क जस्तो छ ,जहाँ फूलैफूलका माझमा सुन्दर कमला हरिया दुबोमा बसेर घन्टौँ गफिन, कविता रच्न वा भावनात्मक वार्तालापमा तल्लीन हुन मन लाग्छ । साँच्चिकै भनूँ भने बिहान-बेलुका यहाँ डुल्न आउने हो भने छुट्टै शान्ति मिल्छ ।
ठ्याक्कै समाधि नै भएको ठाउँमा पुग्नुअघि चप्पल-जुत्ता फुकाल्नपर्ने रहेछ । समाधिस्थल नै चाहिँ अत्यन्त सम्मानित रहेछ ,श्रद्धाका साथ फूलका गुच्छा चढाउँदा रहेछन् मानिसहरू । म भारतीय होइन, गान्धी परिवारको राजनीतिबारे पनि म धेरै जान्दिनँ । तैपनि समाधिस्थलमा पुग्दा कसोकसो मेरा दुवै हातहरू जोरिएर उचालिएछ न् । पछि पो ख्याल भयो, भारतीय यी मनीषीहरूलाई पत्तै नपाई सम्मान गरेछु भनेर ।
गान्धीसमाधिबाट मुग्धिएर लाग्यौँ हामी कुतुबमिनार तर्फ । कुतुबमिनार हेर्न पुग्दा मलाई आफ्नो बाल्यकालको सम्झना भयो । म दस-एघार वर्षको हुँदा साइकलमा बाकसजस्तो एउटा भाँडो ल्याउँथ्यो एउटा घुमन्तेले । कोहीसँग मकै, कोहीसँग पैसा लिएर उसले सिनेमा देखाउँथ्यो । हाम्रो गाउँमा त्यतिखेर चलचित्र घर थिएन । हामीले सिनेमा देखेकै थिएनौँ । त्यसैले घुमन्तेले सिनेमा भनेर ल्याएको भाँडो हामीलाई साँच्चिकै सिनेमा जस्तो लाग्थ्यो ।
म पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै सिनेमा हेर्न जान्थेँ । उसले बाकसमाथिको ह्यान्डिल घुमाउँदै जान्थ्यो, चित्र सर्दै जान्थ्यो । एकपछि अर्को रङ्गिन आकर्षक चित्र हेर्दा हामीलाई खुब आनन्द लाग्थ्यो, सिनेमा हेरेकै मज्जा आउँथ्यो । हामी फुरुङ्ङ परेको देखेर फेरीवाला मक्ख पर्थ्यो र भन्दै जान्थ्यो 'ए, राजेश खन्ना देखो, 'ए हेमा मालिनी देखो', ए, मकैका घोगा देखो आदिआदि । हेर्नमा मज्जा आउने हुनाले ऊ आएपिच्छे म पनि मकैका घोगा लिएर कुदिहाल्थेँ ।
हो, त्यसैबेला सिनेमाभित्र देखेको दिल्लीको कुतुबमिनार अर्थात् धरहराको सामुन्ने थिएँ म । कुतुबमिनार मात्र थिएन त्यहाँ । त्यसको सुरक्षार्थ बनाइएजस्ता लाग्ने अवशेष र भग्नावशेषहरू पनि थिए त्यहाँ ।
पहिलेका राजा-माहाराजाहरूले सोखका रूपमा बनाए तापनि ,यस्ता कुरामा गरिएका खर्च त्यतिखेर फजुल लागे तापनि आज ती राष्ट्रकै सम्मानित बनेका छन् र अत्यन्त सजगतासाथ सुरक्षित गरिएका छन्।
अँ, त्यसपछि हामी इन्डियागेट हुँदै हामी लाग्यौँ इन्दिरा गान्धी म्युजियम । जाने-नजाने, जाने-नजाने गर्दै थिए कति साथी । हामी अघि बढिहाल्यौँ ,पछि उनीहरू पनि आएछन् ।
मैले 'नेहरुज लेटर' पढेको थिइनँ तर विद्यालय पढ्दाताकै सान्दाजु चन्द्रमोहनबाट प्रसङ्ग भने सुनेको थिएँ धेरैपटक । "त्यो पुस्तक जवाहरलाल नेहरुले आफ्नी छोरी इन्दिरा गान्धीलाई लेखेका चिठीहरूको सँगालो हो" भन्नुभएको थियो उहाँले । बाबुले छोरीलाई लेखेका व्यक्तिगत चिठीहरू अरूका लागि पनि पठनीय र प्रेरक हुन्छन् भन्ने सुन्दा छक्क परेको थिएँ म । त्यसैले इन्दिरा गान्धीका बारेमा थोरै भए पनि चासो राख्ने गरेको थिएँ । यहाँ अर्थात् इन्दिरा गान्धी म्युजियममा चाहिँ इन्दिरा गान्धीको दिनचर्या ,जीवन, सङ्गत तथा उनीप्रति अरूको दृष्टिकोण झल्काउने वस्तुहरू सङ्ग्रह गरिएका थिए । भारतको कुनै बेलाकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीप्रति त्यसैत्यसै सम्मान पलाएर आयो पुन:स्मृतिले, उनले प्रयोग गर्ने गरेका सामग्रीहरूले, उनको विवाहका झल्काहरूले, उनले पाएका सौगात र उपाधिहरूले, अनि उनले आफ्नो हत्याका दिन लगाएका सारी, गहना र भिरेका ब्यागहरूले ।
यही म्युजियममा भेटिए राजा वीरेन्द्र । राजा वीरेन्द्रको सम्झना ताजा बनेर आयो । विदेशमा तस्विर मात्र देख्ता पनि आत्मगौरवले मन धपक्क बल्यो । तुरून्तै हत्या गरिएको क्रूर र वीभत्स दृश्य आँखा अगाडि आयो र मन कस्तोकस्तो नरमाइलो भयो ।
लालकिल्ला हेर्ने ठूलो उत्कण्ठा भएर पनि आइतबारे भीडले हाम्रो अपेक्षामा तुषारापात गर्यो । लाल किल्ला हेर्न खोज्नेहरूको पङ्क्ति निकै लामो थियो र घामले पनि प्रचण्डता प्रदर्शन गरिरहेको थियो । स्टेसनमा पुग्न हामीसँग एक घण्टा मात्र समय बाँकी थियो । यहाँको लाममा मात्र हामीलाई एक घण्टा लाग्ने थियो, हेर्न कतिबेर लाग्थ्यो होला ! त्यसैले होला समयको लगामले कसेर लालकिल्लाको परिसरबाहिर ल्याइपुर्याएको हामीलाई ।
समय घर्कँदै थियो, 'दिल्लीको चिनु' भनेर हामीले केही किन्नु पनि थियो । आइतवार हुनाले दिल्ली बन्द जस्तै रहेछ । त्यसैले हामी पस्यौँ सधैँजसो खुला रहने चाँदनीचोकमा । दिल्लीमा सामान सस्तैमा पाइन्छ भन्दा रहेछन् मान्छेहरू । जयपुर जत्तिकै नभएपनि महँगै रहेछ चाँदनीचोकभित्रको दिल्ली पनि । साना पसलहरू छन् चाँदनीचोकमा । रेलको समय र बिदाको दिन सम्झँदै बजार गर्यौँ हामीले । मैले किनेका सामानहरू दिल्लीमा भन्दा वीरगन्जमै सस्तो पाइने रहेछ । जयपुरमा ठगिनबाट बचेको म भारतको राजधानीमा भने फेला परिहालेँ ।
भारतीयहरू आफ्नो देशका प्रत्येक निधिको प्रचार गर्न, महत्त्व बढाउन तथा संरक्षण गर्न अत्यन्त सचेत र तत्पर रहेछन् ।
अँ, बजार सकेर हामी स्टेसनमा आयौँ । जुन रेलमा चढेका थियौँ, त्यसैबाट हामी नरकटियागन्जसम्म आउन पाउँथ्यौँ । यो रेल मुजफ्फरपुर जाने हुनाले हामीले नरकटियागन्जमा रेल बदलिनु थियो । लोकल रेलमा चढ्दा सिट पाइने कम सम्भावनाले चढ्दा भने बढी भीड हुने रहेछ । चढिसकेपछि भने त्यस्तो असुविधा भएन ।
नरकटियागन्जबाट यता आएपछि भने पल्लो डब्बाबाट
नारीआवाजमा गीत सुनियो । मुक्त कण्ठले गाउने तिनीहरू मागेर गुजारा गर्नेहरू रहेछन् । तर माग्ने जुक्ति भने तिनीहरूको फरक थियो । हामी उता लाग्ने बेलामा हिजडाहरूले माग्दाखेरि अपनाएजस्तो अश्लील व्यवहार उनीहरूको थिएन । अनि छोरीको बिहे गरिदिनुछ भनेर एउटी तरुनीलाई अगि लाएर माग्दै हिँड्ने आमाको भूमिकामा रहेकी एक माग्नेको जस्तो चाला थिएन यिनीहरूको । यिनीहरू हक्की थिए । कला र गलाको संयोजन गरेर यात्रीहरूलाई मोहित पार्न सक्थे ।
पल्लो कोठामा गीत घन्केको सुनेर हाम्रो डब्बाका प्राय:को ध्यान उतै मोडियो । चालीस वरपरको उमेरका ती महिला विभिन्न गीतका टुक्राहरू निरन्तर गाउँथे ,मानौँ ती सबै गीतहरू एकै गीतका फाँकीहरू हुन् । उनीहरूलाई कुनै पनि गीत सिङ्गो रूपमा गाउन आएपनि नआएपनि वा उनीहरूले विविधता दिन खोजेको भए पनि उनीहरूले दिल खोलेर गाएका थिए । कलाकारिताको उच्च सम्मान गर्न कुरा राख्तै मोटै रकम माग गरेका थिए । उनीहरूले मागेजति दिन पल्लो डब्बाकाहरूलाई हम्मे परयो होला । मलाई चाहिँ तिनीहरूको प्रस्तुति रोचक लाग्यो । रेलबाट ओर्लिसकेर पनि उनीहरूको मुक्त आवाज मेरो कानमा गुन्जिरहेकै छ :
'परदेशी ! परदेशी !!
मुझे छोडके, मुझे छोडके !'
Chaitanya March 6, 2010 at 7:37 PM
निकै मजाले घुम्नुभएको रहेछ | हामीले पनि हाम्रा गौरब र निधिहरुको प्रचार प्रसार र संरक्षण गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो है!
Dilip Acharya March 7, 2010 at 7:23 AM
रमाईलो यात्रा संस्मरण ।
Basanta March 12, 2010 at 6:50 AM
कृष्णपक्ष March 13, 2010 at 6:54 PM
संस्मरण खुबै मन पर्यो । शुरुमा एकपटक सरसर्ती पढें .. फेरी धित नमरे पछि दोहोर्याएर पढें, निकै रोचक र मिठो लाग्यो ।
laxman bhandari November 8, 2010 at 9:03 PM
nikai ramro sanga ghumnu bhaya6 tara india ma yati sanchai ghumnu bhanako nikai laak bhanu ki?
कमेन्ट गर्ने सजिलो तरिका :
- तल बक्समा आफ्नो कमेन्ट लेख्‍नुस्
- comment as : select profile लेखेको छेऊको arrow मा click गर्नुस्
- तल रहेको Name/URL क्लिक गर्नुस्
- आफ्नो नाम र वेबसाइट (छ भने) हाल्नुस्
- Post Comment क्लिक गर्नुस् !!
म त Nepali Blogger Group मा सम्मिलित भएँ , तपाई नि ?
नेपाली ब्लगरहरुको मूल घर
कथा (6) कविता (19) केटाकेटी कुनो (1) खोज (2) चिठी (5) भाषा (2) लघुकथा (5) लेख (12) विचार (9) समीक्षा (6) संस्मरण (7)
poet khanalka sirjana
nepalimanharu.com नेपाली मनहरू
कोपिलामै मर्यो माया
आफ्नो देशमा त यस्तो छ अरुको देशमा झन के होला ?
no.1 nepali movies and more site thenepalinda....
नेपाली बजारमा आएको हम्मर(हम्मि).....
www.TheAzNepal.com - द एरिजोना नेपाल
सिर्जनाहरू. Powered by Blogger.